Igama elithi chrysoberyl elihunyushwe kusuka kwisiGreki (chrysos) lisho igolide. I-Vaiduriam, i-hrisuberil, i-cymophane, i-alexandrite-eminye ehlukahlukene yegama le-chrysoberyl nezinhlobo zayo. I-mineral ine-shadow shades - insundu, igolide ephuzi, ibomvu, i-violet ne-colorless.
I-Chrysoberyl ingapendelwa ezinhlobonhlobo zemifino eluhlaza - kusuka eluhlaza okwesibhakabhaka, ophuzi kuze kube mnyama. Izinhlobonhlobo ze-shades zamaminerali ngenxa yokuthi i-chromium ne-oxide insimbi ithatha ingxenye ye-aluminium, futhi insimbi ensimbi ifaka ingxenye ye-beryllium. Futhi, ngezinye izikhathi ekubunjweni kwe-Chrysoberyl ihlangana ne-Titan. Lokhu kungcola kwamanye amazwe nakho kunikeza izinhlobo ezihlukahlukene ze-shades kule mineral. Isampula esivame kakhulu kunombala ohlaza okwesibhakabhaka ophuzi, lo mthunzi we-Chrysoberyl uzuze nge-iron ne-chromium. Kulokhu, i-chrome inikeza umbala ohlaza okwesibhakabhaka etsheni. I-element ye-beryllium yinto engavamile emvelweni. Ngaphezu kwe-chrysoberyl, i-brillium itholakala kwamatshe anjenge-gambergite, i-beryllonite, i-phenakite, i-euclase. Igama layo yi-element Beryllium etholakele ku-beryl yamatshe.
Ama-deposit of chrysoberyl. I-Chrysoberyl idala ukungeniswa kwe-mica shales ne-granite. Ivela ezinhlotsheni zokuxhumana-pneumatolytic ngokuhambisana ne-phenacite, i-apatite, i-beryl, i-fluorite namanye amaminerali. I-Chrysoberyl nayo ikhona emithanjeni ye-pegmatite. Izindleko ezidumile kakhulu eMinas Gerais (eBrazil). I-Chrysoberyl itholakala ku-aluminium i-Ceylon, nasesiqhingini saseMadagascar.
Itholakale futhi ekudonsheni ngendlela yama-drums nama-crystals, e-Urals (eRussia), e-Colorado (USA), eBrazil (i-Espirito Santo). Emkhatsini womkhumbi womhlaba, i-chrysoberyl igxilile futhi i-placers iyawa.
Ukusetshenziswa kwe-chrysoberyl. Leli gugu eliyigugu lingavamile emvelweni, ethandwa kakhulu, ngoba linomthelela weso lekati. Le ndawo ibangelwa ukuthi leli tshe livulekile. I-Chrysoberyl ayitholakali isetshenziselwa ubucwebe, nakuba ubunzima bayo buyivumela. I-Chrysoberyl ayinambala futhi ihlanzekile uma itshe lihlangana nomuthi wakhe wamakhemikhali. I-chrysoberyl enjalo ayithandwa kakhulu, ngoba ukukhishwa kwayo akuvumeli ukuncintisana ne-diamond, isafire emhlophe ne-zircon. Okubaluleke kakhulu yi-chrysoberyls, enomdlalo omuhle wokukhanya. Amatshe anjalo asetshenzwa ngendlela yama-cabochons, okuthiwa "iso lenkathi"
Izakhiwo zezokwelapha. ERussia lasendulo, kwakuhlale kukholelwa ukuthi i-chrysoberyl iyasiza umuntu ukuba agweme ukuphuza ngokweqile utshwala. Emithi yokwelapha, umbono usuqalile ukuthi izindawo ze-chrysoberyl ziyadingeka ukusiza ukuphatha izifo, ukoma nezinye izifo zesikhumba. Ngokusho kwezincomo zemithi yasempumalanga, i-chrysoberyl noma ubucwebe nayo kufanele igqoke ukukhushulwa kokukhathazeka okukhulu. Amaminerali angabuye abe nethonya elihle ezinsweni zenhliziyo, ngokusho kwezintatheli. Ithonya ekubuyiseni kokuqala kokuncintisana kubangelwa ngamatshe nge-purple hue.
Izakhiwo zemilingo. I-Chrysoberyl emlenzeni waseNdiya lasendulo yayisetshenziswa njengesilwane esinamandla okunikeza umuntu amandla okuqonda ulimi lwezilwane ezahlukene. EYurophu, babembethe izindandatho ngaleli gugu eliyigugu futhi bakholelwa ukuthi kusiza indoda ukuheha abesifazane.
Amantombazane okwenza umkhuba wamanje akholelwa ukuthi uma ugqoka izindandatho zegolide namasongo nge-chrysoberyl, khona-ke inhlanhla izohamba nebhizinisi. Futhi i-chrysoberyl inika inkosi yayo izimfanelo ezinjengoku: ukuqonda, intuition, ukwenza izinqumo ezifanele. Kukhona umbono wokuthi amaminerali akwazi ukunikeza ukuthula nokuthula emphefumulweni womuntu. Ukuze uvimbele izinkinga ezinkulu zezwe zomhlaba, i-chrysoberyl isetshenziswe njenge-amulet.
Abantu abazalwa ngaphansi kwesibonakaliso se-zodiacal of Cancer, bavikelwe ngu-chrysoberyl, bazophumelela ebhizinisini nokuthula kwengqondo kuye.
Ama-talisman kanye nezifiso. U-Chrysoberyl uyisilwane kubantu abasebenza ezenzweni zesayensi, ezenhlalakahle noma ezentengiselwano. Ukuze i-mascot, i-platinum noma indandatho yegolide ene-chrysoberyl, eye yabhekana ne-faceting, isetshenziswa kaningi. I-talisman ngendlela yendandatho iqeda amathonya angalungile abangelwa umona wabantu, futhi futhi ulethe inhlanhla ezindabeni zothando kanye nezindaba zansuku zonke.
Ukuphazamiseka kwemifino, izinhlungu zomzimba
Izakhiwo eziwusizo zomsedari waseSiberia
Ukuphulukisa impahla ye-koumiss
Ikhekhe "I-Zebra" nge-cottage shizi kanye ne-chocolate ukhilimu
I-Stew yenkukhu nama-beet
Izitayela zokuthandana: ukuthi ungayichaza kanjani?
U-Olga Buzova ku-show "Ukudansa ku-TNT. Isizini 3 "saqala ukukhuluma ngokuzingela
Chocolate nge pepper
Indlela yokuphefumula i-curlers i-foam curlers
Yeka ukuthi ungaziphathe kanjani ukuze ungaqedi ubuhlobo